Tag: xawaaraha bogga » Martech Zone
Tag: xawaaraha bogga
Maxay Tahay Inaad U Adeegsato Muujinta Muuqaalka
Talaado, Juun 19, 2018 Sabtida, Juun 23, 2018 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Marka naqshadeeyayaasha garaafyada iyo sawir qaadayaashu soo saaraan sawiradooda ugu dambeeya, sida caadiga ah looma habeyn si loo yareeyo cabirka faylka. Waxaan lahadlayay Caleb Lane, oo ah lataliyaha amniga iyo hagaajinta WordPress, wuxuuna ogaaday in cabirka muuqaalka ee boggayagu uu aad uweyn yahay (marka lagu daro arimo kale oo badan oo uu naga caawin doono inaan wax ka badalno). Thanks to Erik Deckers hordhaca! Haysashada sawirro waaweyn micnaheedu maahan inaad u baahan tahay cabirro muuqaallo waaweyn ah.
Tuesday, June 19, 2018 Saturday, June 23, 2018
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Websaydhyada gaabisku waxay saameyn ku yeeshaan sicirka boodhka, heerka beddelaadda, iyo xitaa qiimeynta mashiinkaaga raadinta. Taasi waxay tiri, Waxaan layaabay tirada boggaga internetka oo wali si gaabis ah u gaabiya. Adam wuxuu i tusay degel maanta lagu martigaliyay GoDaddy kaas oo qaadanayay in kabadan 10 ilbiriqsiyo ah in la raro. Qofka faqiirka ahi wuxuu u maleynayaa inay keydinayaan dhowr dollar oo ku saabsan martigelinta… halkii ay lumin lahaayeen lacag badan maxaa yeelay macaamiisha mustaqbalka ayaa damiintay. Waxaan kor u qaadnay aqristayaasheena
13 Tusaalooyinka Sida Xawaaraha Goobtu Saamaynta Ugu Leeyahay Natiijooyinka Ganacsiga
Axad, Maarso 26, 2017 Axad, Maarso 26, 2017 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Wax yar ayaan ka qornay waxyaabaha saameynaya awooda websaydhkaagu u leeyahay inuu si dhakhso leh u rarto oo aan la wadaagno sida xawaaraha gaabiska ahi u dhaawacayo ganacsigaaga. Waxaan si daacad ah ula yaabay tirada macaamiisha aan la tashano kuwaas oo waqti iyo xoog badan ku bixiya suuq geynta iyo istaraatiijiyadaha dhiirrigelinta - dhammaantood inta aan ku xirayo martigeliye aan fiicnayn oo leh degel aan ku habboonayn inuu si dhakhso leh u rarto Waxaan sii wadeynaa kormeerida xawaaraha bartayada iyo
15 Dariiqo oo lagu Kordhiyo Heerka Is-beddelka E-ganacsigaaga
Saturday, May 28, 2016 Axad, Disembar 24, 2017 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Waxaan la shaqeyneynay fiitamiin iyo dukaan dheeri ah si aan gacan uga geysano kordhinta muuqaalkooda raadinta iyo heerarka beddelashada. Kaqeybqaadashadu waxay qaadatay waqti iyo xoogaa xoogaa ah, laakiin natiijooyinka ayaaba bilaabay inay muujiyaan. Goobtu waxay u baahnayd in dib loo habeeyo oo dib loo naqshadeeyo sagxadda kor. In kasta oo ay ahayd goob si buuxda u shaqeyneysay hadda kahor, haddana ma aysan lahayn waxyaabo badan oo lagama maarmaan u ah dhisidda kalsoonida iyo fududeynta is-beddelka